Izinto eziluncedo nezingeloncedo kweetyhubhu ngendlela nokujika - Kuanyu Stainless Co., Ltd.
Home » Izinto eziluncedo nezingeloncedo kweetyhubhu ngendlela nokujika
Izinto eziluncedo nezingeloncedo kweetyhubhu ngendlela nokujika
Ngenxa imfuno imveliso kunye nokunciphisa iindleko zokuvelisa kunye necandelo lokuvelisa, abathengi abaninzi baye bayeka ukuthenga kumbhobho olungenazimfanta sentsimbi original abandayo-itsalelwa kumbhobho steel ngendlela nokujika. Makhe sijonge kwi eziluncedo nezingeloncedo kweetyhubhu steel ngendlela nokujika:
izinto eziluncedo: 1. pipe Precision nokujika isantya bokwakha fast and output yemveliso iphezulu. Ngaphandle kokonakalisa ukutyabeka, zingenziwa iintlobo ezahlukeneyo iipatheni cross-candelo ukuze zilungele iimfuno nemiqathango. 2. Inkqubo ebandayo thaca ungenza umbhobho ngqo sentsimbi ukuvelisa elikhulu eqine deformation, Oku kuphucula kwindawo eziyimveliso umbhobho ngendlela sentsimbi. 3, elithe ngqo yombhobho ngendlela sobhedu eliphezulu, ukuze umsebenzisi kunciphisa ukuveliswa kwenkunkuma.
Ububi: 1. uxinzelelo lentsalela ikhona kwicandelo ipipi ngendlela nokujika, ochaphazela iimpawu buckling lulonke kunye nowengingqi ipipi seamless steel ngendlela; 2. Le ngqongqo torsional simahla kwicandelo ipipi ngqo sentsimbi liphantsi kakhulu; 3. pipe steel umkhuhlane-liqengqiwe ngqo seamless Ukubunjwa udonga ubukhulu incinci, kunye nokuba nako ukuthwala umthwalo kanzulu wendawo ayanelanga.